बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन कुन `अदृश्य शक्ति´ले रोक्यो ? इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष रौनियारले खोले यस्तो रहस्य (भिडियो) – Artha Sarokar :: Nepal's No.1 Economic News portal.
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन कुन `अदृश्य शक्ति´ले रोक्यो ? इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष रौनियारले खोले यस्तो रहस्य (भिडियो)
काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले सेयर बजारमा आउने चाहने नव प्रवेशी लगानीकर्तालाई बुझेर मात्रै बजारमा प्रवेश गर्न आग्रह गरेका छन् । अर्थ सरोकारको ‘मार्केट टक’ कार्यक्रममार्फत अध्यक्ष रौनियारले साना र भर्खर प्रवेश गर्न चाहाने लगानीकर्तालाई सेयर बजारका बारेमा बुझेर मात्रै प्रवेश गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
सो कार्यक्रममार्फत बजारमा जतिसुकै चलखेल भएता पनि सम्बन्धित निकायले कारवाही नगरेको र त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । यस्तै अध्यक्ष रौनियारले बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुनेबेला ११ सय ७५ को सेयर घटेर २ सय ९२ मा झरेको पनि बताए । त्यसबेला १ करोडको सेयर भएको व्यक्तिपनि ३,४ लाखमा झर्नुपरेको बताए ।बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा केहि अदृश्य शक्तिले रोकेको स्मरण गर्दै उनले धितोपत्र बोर्डकै कारण बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिईएको जिकिर गरे । बाँकी भिडियोमा हेर्नुहोस् :